vahaolana - gomymobi.com
Offers Vahaolana matanjaka
Ataovy ny orinasanao fahombiazana & manidina avo kokoa !!!
gomymobi.com dia natao hanampiana anao amin'ny fananganana tranokalan'ny orinasanao haingana, mora ary mandaitra. Fitaovana ilaina rehetra hanehoana ny varotrao sy ny vokatra famoronana ho an'izao tontolo izao.
Jereo bebe kokoa ireo fiasa mahery vaika etsy ambany azonao ampiasaina handrafetana sy hitantanana ny fisianao an-tserasera.
na Manomboha izao
gomymobi.com dia tranokala an-tranonkala manampy anao hamorona tranokala fandraharahana mandray andraikitra feno nefa tsy mila mampiasa vola mandritra ny ora firy amin'ny fotoana fampandrosoana lafo vidy na sarany lafo vidy ho an'ny serivisy tranonkala natokana. Ankoatr'izay, afaka mamorona magazay tsy manam-petra ianao hivarotra ny vokatra noforoninao mivantana amin'ireo mpividy manerantany.
Andao asehoy ny marikao sy ny vokatra famoronana tsara indrindra amin'ny olona rehetra manerantany miaraka amin'ny mpanorina fivarotana eCommerce anao. Manampy anao mamorona magazay tsy voafetra izahay, hivarotra vokatra tsy voafetra; tsy misy sarany amin'ny fifanakalozana, tsy misy sarany aloa; hahazo 100% ianao amin'ny zavatra amidinao.
Ny iraka ataontsika eto dia mifantoka amin'ny vahaolana tsotra tsara indrindra hanohanana anao.
Ireo mpanjifantsika mahatalanjona dia tia ny vahaolana mahavariana
Ny tanjonay voalohany dia ny hifantoka amin'ny fampifaliana ny mpanjifanay. Eny, izao no fomba fiasanay amin'ny orinasanao.
Vahaolana mialoha momba ny fandraharahana
Famandrihana sy entana virtoaly
Atombohy ny fananganana tranokalan'ny orinasanao amin'ny volavolan-dalàna na misafidy modely vita amina endrika maro. Miaraka amin'ny fananganana tranokala manintona sy manadino indrindra eto an-tany, azonao atao ny mamolavola sy mamolavola tranonkala rehetra ilainao na tadiavinao.
Andramo maimaim-poana ny Element Builder
Ampifanaraho amin'ny tranokala misy fotodrafitrasa manankarena. Ny vahaolana eCommerce, streaming, ary ny mpikambana rehetra dia voatazona tanteraka ary miaraka amin'ny fitondran-tena mahomby.
Mikaroha amin'ny hetsika
Manamboara rindranasa an-dàlana mandroso amin'ny alàlan'ny fanovana kaody manokana hanampiana na hanovana izay tianao. Tantano ny atiny mavesatra rehetra ao ambadiky ny seho ary asehoy tsara tarehy amin'ny famerimberenana mamerina.
Amidio ny fisoratana anarana amin'ny fe-potoana rehetra, mpikambana sy fonosana ho an'ny serivisy, entana virtoaly, atiny, fiarahamonina ary rindrambaiko. Manolora fandoavam-bola miverina na indray mandeha miaraka amina karazana fotoam-pitsapana maro amin'ny fampiasana mpanome fandoavam-bola azo antoka.
Tongasoa eto gomymobi.com
Toerana mety tsara hampiantrano ny tranokalan'ny orinasanao mahatalanjona
Vahaolana eCommerce maimaim-poana ho an'ny fivarotana an-tserasera
MAIMAIMPOANA ho an'ny tranonkalanao
gomymobi.com faly manampy anao mamorona tranokala voalohany anao ary mampiantrano izany MAIMAIMPOANA mandritra ny androm-piainanao.
Ny fisoratana anarana dia tena tsotra & haingana, tsy mila carte de crédit; ary mijanona miaraka aminay mandrakizay ny kaonty sy ny tranokalan'ny orinasanao.
Misokatra fivarotana TSY MISAOTRA
Raha mila manokatra magazay an-tserasera tsy voafetra ianao mba hivarotana vokatra isan-karazany dia mety ho vitanao ny hanao mora foana.
Amidio ny vokatra isan-karazany
Miaraka amin'ny eCommerce platform anay, afaka mivarotra vokatra nomerika sy ara-batana ianao, ary koa ny famandrihana amin'ny magazay iray ihany.
Anaran'ny Domain Custom
Raha efa manana sehatra ianao ary te hampiasa azy io amin'ny tranokala noforonina dia mila apetrakao fotsiny ity sehatra ity dia avelao ity tranokalan'ny orinasan-tserasera ity miaraka amin'ity sehatra manokana ity. Toa matihanina kokoa ny tranonkalanao miaraka amina sehatra manokana.
Ampidiro amin'ny alàlan'ny FTP
Raha manana mpampiantrano manokana ianao ary te-hampiantrano ny tranokalanao noforonina dia manana fitaovana mora hanampy anao izahay hampakatra ny rakitra an-tranonkala rehetra amin'ny mpampiantrano anao amin'ny tsindry iray. Na azonao atao ny misintona tranonkala iray manontolo eo an-toerana.
Subdomain tsy manam-paharoa ho an'ny tranokala tsirairay
Mahaiza mamoaka sy mitahiry ny tranokalanao amin'ny tsindry 1 fotsiny.
Famandrihana mora sy mora
Vantany vao afa-po amin'ny vahaolana izahay, dia manome famandrihana marim-pototra maro hanatsarana ny kaontinao hahazoana fampisehoana matanjaka kokoa.
Mahazo amin'ny alàlan'ny fivarotana fahazoan-dàlana amin'ny lohahevitra
Azonao atao ny mahazo vola aminay, amin'ny fivarotana ny lisansa foto-kevitray amin'ireo mpampiasa hafa. Hahazo ny vola miditra rehetra ianao, tsy mandoa sarany izahay.
Toerana fivarotana lohahevitra momba ny tranonkala
gomymobi.com dia toerana ho an'ny mpampiasa rehetra ihany koa mba hivarotany ny lohahevitra tiany, ny mpamorona dia mety hanome lohahevitra maimaimpoana na hivarotra fahazoan-dàlana 2: isaky ny famoronana na mandritra ny androm-piainany.
Mazava ho azy, ny mpamorona dia afaka mampiditra ny kaody dokam-barotra (na sehatra) azy ireo ao anaty ny lohahevitr'izy ireo raha te hanome azy ireo maimaim-poana.
Tranonkala sy pejy tsy voafetra
Azonao atao ny mamorona tranokala tsy voafetra ary mamorona pejy web tsy voafetra ihany koa ho an'ny tranonkala tsirairay.
Tracker fifamoivoizana namboarina
Izahay dia manana ny làlan'ny fifamoivoizana namboarina izay manampy anao hanisa ny fitsidihana sy ny fizarana pejy, azo soratana isan'andro ireo antontan'isa ireo.
Azo antoka fa azonao atao ny mampiditra ny sehatry ny tracker hafa, toa ny Google Analytics mora sy haingana.
Tranonkala sy lohahevitra mamaly tanteraka
Ny lohahevitra sy tranokala rehetra dia mamaly tanteraka sy sariaka amin'ny finday, natao hiasa amin'ny vahaolana amin'ny efijery misy an'ny mpizaha maoderina.
Ary ny tena zava-dehibe kokoa, ny Panel Control & User Interface dia mandray andraikitra feno ihany koa, ireo mpampiasa dia afaka mitantana sy mamorona ireo tranonkala isaky ny aiza na aiza.
Fampisehoana matanjaka sy hafainganana
Ny rafitray dia natao hanomezana ny tranonkalanao sy hitehirizana ny hafainganana sy ny fahombiazana tsara indrindra.
Misafidiana lohahevitra tranonkala noforonina 95 mahery ho an'ny orinasa tsirairay tianao hapetraka.
Fahalalahana famoronana endrika
Mamolavola sy mampivoatra ny tranokalanao amin'ny fomba tianao indrindra amin'ny alàlan'ny drag and drop.
Hatsarao ny Browser Media
Asehoy ny sarinao, ny horonan-tsarinao, na ny haino aman-jery multimedia rehetra ao anaty fisie mahafinaritra miaraka amin'ny Browser Media matanjaka anay.
Fivarotana tsara tarehy
Asehoy sy amidio ny entanao nomerika sy ara-batana na serivisinao na orinasao amina magazay an-tserasera mahafinaritra.
Mpitantana fivarotana sy vokatra
Araho ny baiko rehetra ary tantano ny tahirin-kevitrao isaky ny manapa-kevitra: desktop, laptop, tablette na finday.
Manolora vahaolana azo antoka azo antoka izay mahatonga ny fifanakalozana an-tserasera ho tsotra sy azo antoka ho anao sy ny mpanjifanao. Ekeo ny carte de crédit, PayPal, Stripe, Authorize.net, fandoavam-bola an-tserasera sy maro hafa - maimaim-poana ny komisiona.
Tapakila sy fihenam-bidy
Mampiroborobo ny fivarotana eo am-pivarotana amin'ny alàlan'ny fanolorana fihenam-bidy amin'ny vanim-potoana sy fandefasana maimaim-poana amin'ny baiko amin'ny hetsika manokana.
Avelao izahay hanatsara ny orinasanao ary hampidina azy io ho avo kokoa !!!
Amboary ny tranokalanao sy ny magazanao IZAO